Iwo akanakisa maficha eku manejimendi enharaunda enzvimbo dzekudzidzisa | Linux Vakapindwa muropa
ari nharaunda dzekudzidzisa zvakakosha. Kudzidza kwevanhu vazhinji kutenderera pasirese kunoenderana navo. Kana vakazvikomberedza vega nesoftware yepamutemo, unenge uchisundidzira vadzidzi ivavo kuti vange vachifanira kuisa mari mumarezinesi kana vachinge vasiya nharaunda kuti varambe vachishandisa zvirongwa zvakafanana.
Uyezve, zvimwe zvikoro zvimwe nyika dzisina kusimukira ivo havana mukana kune mamwe masisitimu anoshanda uye software yakapihwa mutengo wemarezinesi iwo wavaisakwanisa kutenga. Izvi zvinogadzira musiyano wakakosha wekudzidzisa pakati penyika dzine hurombo uye dzakapfuma, zvichimanikidza varombo kusarudza pakati penzira yetsika yekushandisa pirate proprietary software kana kusashandisa maturusi eIT.
Naizvozvo, zvakakosha kwazvo kuve nemidziyo yenzvimbo dzedzidzo dziri software ye open source, yemahara uye yemahara. Ivo vanokwanisa kuenzanisa maererano nemikana yakaenzana yevose, zvisinei nekwavakabva.
Pano Ini ndichatarisa pane ayo anoshandiswa manejimendi yenzvimbo idzi dzedzidzo uye izvo zvakakosha kudzidzisa makirasi, senge:
ATutor: Kana iwe uri mudzidzisi, saka iwe unofanirwa kuziva iyi app. Iyo iri online software iyo iwe yaunogona kubata ako makosi uye nekupa vadzidzi izvo izvo zvavanoda. Iwe unogona kutumira zvidzidzo, bvunzo, mamakisi, uye zvimwe zvakawanda. Vadzidzi vachakwanisa kugadzira maakaundi ega ega kuti vatevere zvese izvi zvirimo.
iTalc (zvino yava Veyon): ipuratifomu yenzvimbo dzedzidzo dzinobvumira mudzidzisi kutevera uye kudzora kuratidzira kwevadzidzi vavo mukirasi yekudyidzana pane network. Yakanakira kudzidza kure.
FET: kurerutsa zvirongwa muzvirongwa zvedzidzo. Kune izvi, iyi yemahara sisitimu inoshandisa maheuristic algorithms ekugadzira, senge huwandu hwemazuva pavhiki anowanikwa, maawa ekudzidzisa, izvo zvidzidzo zvinodzidziswa, zviitiko, huwandu hwevadzidzisi varipo, mapoka evadzidzi nemapoka, mapoka aripo, nezvimwe.
GCompris: ihuru seti yemapurogiramu ekushandisa yakakwana nzvimbo yekudzidzisa kune vadiki, vane makore ari pakati pe2 ne10 makore. Iyo ine akati wandei zviitiko zvekudzidzisa nemitambo, yakanangana nekuvandudza kunzwisiswa uye kushandiswa kwemakomputa masystem, pamwe nezvakakosha zvidzidzo (kuverenga, jogirafi, masvomhu, ...).
ZveMwanaPlay: inogona kuve imwe suite kune iyo yapfuura, zvakare kune vadiki. Yakanangana nezviitiko zvekurangarira, tsamba, nhamba, mitambo uye mashandisiro edzidzo, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iwo akanakisa maficha e manejimendi enharaunda dzedzidzo